Njikọ Taurus na Ọrịa Enyi - Ndakọrịta
Isi Ndakọrịta Njikọ Taurus na Ọrịa Enyi
Njikọ Taurus na Ọrịa Enyi
Taurus na Cancer nwere ike inwe mmasị ozugbo na ibe ha na ọbụbụenyi dị n'etiti ha, n'ihi na ha abụọ lekwasịrị anya na nchekwa. Iji maa atụ, ha chọrọ ezigbo ọrụ, nnukwu ezinụlọ yana nkasi obi nke ezigbo ụlọ.
Mgbe ụfọdụ Taurus nwere ike iji ego na-atụgharị uche maka Cancer iji nwee mmasị na ya, ebe nshịkọ siri ike maka Bull. Otú ọ dị, ọtụtụ oge, mmadụ abụọ a agaghị echebara ịkpa àgwà ọjọọ ibe ha ihu.
Nhazi Taurus na Ọrịa Enyi Enyi
Ihe na-amasị mmadụ abụọ Nnọọ ike ❤ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ukwe, + _-ukwe _ ++
Iguzosi ike n'ihe & Nkwado Nnọọ ike ❤ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ukwe, + _-ukwe _ ++
Tụkwasị obi & Debe ihe nzuzo Ike ❤ ❤ ❤ ❤
Fun & jotọ Ike ❤ ❤ ❤ ❤
O nwere ike ịbụ oge Nnọọ ike ❤ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ukwe, + _-ukwe _ ++
Mgbe ndị enyi, Taurus na Ọrịa anaghị eweda ibe ha ala, nke ụfọdụ kwenyere na ọ bụ ihe nzuzo nke ezigbo ọbụbụenyi ha.
Karịa ịnabata ibe gị
Nchikota di n’etiti ha di nma nihi na o bu nani otu akara n’etiti ha ka ha na-ekewa, ya mere ha nwere ezigbo karmic na-eme nke oma.
Ọ dịịrị ha mfe ịzụlite ibe ha, yabụ ọbụbụenyi ha na-enwekarị ọ happyụ n'ihi na ha abụọ nwere mmasị na nkasi obi na nchekwa.
Mgbe ha na ha nọkọ, ezigbo ndị enyi abụọ a ga-aga ahịa, rie nri n'ụlọ nri dị oke ọnụ ma kesaa ọtụtụ ihe site na ndụ ha kwụsiri ike.
Ha na-enye ndị ezinụlọ nnukwu mkpa, ya mere, ha ga-ekwu maka ụmụ ha na ihe ndị di na nwunye ha na-eme. Ya mere, ndị Tauri na Ọrịa na-elekwasị anya na ndụ ezinụlọ karịa na oriri.
Ha nwere ike ịbụ ndị enyi kemgbe ndụ ha niile makana ha na-etolite karịa ka afọ na-aga. Ọ ga-adịrị ha mfe inwe mmasị n’ebe ibe ha nọ ma n’otu aka ahụ na-akatọ.
Mgbe Cancer chọrọ ijide n'aka na ọ bụ onwe ya, Taurus bụ ihe kachasị mma iji gbaa ya ume. Ọzọkwa, mgbe onye nke ikpeazụ chọrọ inweta ihe ọhụrụ, onye nke mbụ nwere ike iwepụta ezigbo echiche na ezigbo azụmaahịa mgbe niile.
Ha abụọ nwere ezigbo echiche ma nwee ike ịnagide ibe ha, nke pụtara na Cancer agaghị ahụ Taurus dị ka onye nọ ná mkpa. Nsogbu nwere ike ịpụta mgbe ehi ahụ dị isi ike ịnabata echiche nke Ọrịa Cancer, ọnọdụ nke Crab ga-ezo naanị n'akụkụ ma achọghị ịpụta.
Ọ dị mkpa ka ndị Taurus ghọta na enyi ha na-enwe mmetụta nke ukwuu na nke ọzọ, Cancer agaghịzi abụ onye na-eme ihe-ike na-ekwu okwu banyere mkpa ya.
Rulingwa na-achị Taurus bụ Venus, ebe Ọrịa nwere Ọnwa dị ka onye ọchịchị ya. Anụ ndị a dị na mbara igwe nwere ume nwanyị, Taurus nwere ike ịmasị Ọrịa ahụ n'eziokwu ya na imeghe ya n'ihi na ewepụrụ nke ikpeazụ.
A na-eji ezigbo nwanyị nke Ọrịa Cancer eme ihe site na enyemaka nke Taurus bara uru, yabụ na Crab nwere ike ịmịkwu ọrụ mgbe ndị enyi Taurus na-emekọ ihe.
Kedu ihe bụ akara zodiac maka august 29th
Ọnwa na-enwe mmetụta na ebili mmiri na mbara ala a, nke na-eme ka Ọrịa Cancer na-achịkwa, mana Taurus na-elekwasị anya mgbe niile maka atụmatụ ọ bụla nke ndị enyi ya ka ọ rụọ ọrụ, n'agbanyeghị na Ọrịa Cancer na-elekwasị anya na ịme mmetụta.
Ọzọkwa, Crab nwere akụkụ melancholic ma chọọ ịnọ n'ụlọ karịa ịga oriri na ọ partiesụ partiesụ. Ọ gaghị abụ nsogbu ọ bụla mmadụ abụọ a ga-eche ihu, Taurus ga-abịa mgbe niile na ngwọta yana ọ bụ onye ndị ọzọ nwere ike ịdabere na ya.
Mgbe Ọrịa Cancer ga - enwe nsogbu na ndụ ya, Taurus ga - ahụ na a na - emeso nsogbu ndị a niile na Crab na - achọta ihe ngwọta. Otú ọ dị, Taurus na-eche na ọ bụ ya ziri ezi, nke na-ewe ntakịrị iwe, ọbụlagodi na ndụmọdụ ya dị oke ọnụ ahịa mgbe niile.
Onye ọ bụla na-eme nke ọma
A maara ndị mmadụ na Taurus dị ka ndị isi ike, mana ọ bụghị dịka ha nwere ebumnuche ọjọọ, naanị n'ihi na ha chere na ha nwere azịza ziri ezi mgbe niile. Ya mere, ha na-anwa ịnwa naanị inye aka na isi uche ha bụ ka ndị enyi ha dị mma.
ịhapụ nwoke libra naanị
Ọbụna mgbe ị na-emehie ihe, Taurus agaghị ahapụ ndị ọ hụrụ n'anya n'azụ n'ihi na ọ kwenyeghi na ihe nkiri na ịhapụ. Mgbe mmadụ ga-agba asịrị banyere enyi Taurus, nwa amaala a agaghịdị achọ ige ntị n'ihe niile a na-ekwu.
Ndị a na-elekwasị anya na nkọwa oge niile, yabụ ha na-echeta ụbọchị ncheta yana ọbụlagodi mgbe anụ ụlọ nke ndị ha hụrụ n'anya nwere ụbọchị ọmụmụ ha. Ha na-azụlite ma nwee ọgụgụ isi dị ukwuu, ya mere, ha nwere ike ịkwado ndị enyi ha n'oge nsogbu siri ike na nghọta ha dị oke elu.
Ndị Tauri anaghị echebara ị listeninga ndị ọzọ ntị ma nwee ike ịghọta ụdị omume ọ bụla. Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ ha nwere ike ịdị gị ka ụwa dum ọ dabere na ha, ihe na-eweta ọtụtụ ọnọdụ.
Ndị ọzọ ga-abịakwute ha ka ha nwee mmetụta nke nkwado nke mmụọ, nke nwere ike bụrụ ihe nzuzu n'ihi na ha anaghị achọ ịkọkọrịta echiche onwe onye nke ukwuu.
Otú ọ dị, ọ bụrụhaala na ha na-eme ya, ihe nwere ike gbanwee. Ọ dị ha mkpa ka ha were oge ụfọdụ were ezumike ma nweta ụfọdụ echiche.
Ha kwụsiri ike ma na-emekarị ihe ha kwere nkwa, ịghara ịkọwa na ha nwere ike ịkọ na nsogbu ndị ọzọ ma nwee oke mmụọ mgbe ha ga-enyere aka.
Ndị Tauri agaghị ala azụ ime ka ndị enyi ha nwee obi ụtọ n'ihi na naanị ihe ha chọrọ bụ mmekọrịta mara mma nke ndị ọzọ ga-eme ma nwee mmekọrịta siri ike. Ha niile gbasara nchekwa na ọ gaghị ele ha anya ma ọ bụ hapụ ndị mmadụ n'azụ.
Cancers bụ ezigbo ndị enyi n'ihi na ha na-emeso onye ọ bụla dị ka ezinụlọ. Ọzọkwa, ha nwere ịhụnanya, obiọma na ile ọbịa.
Ndị obodo a anaghị eche nche ma na-enyere aka, mana ha nwere mmetụta uche nke na-abawanye njọ, yabụ mgbe esemokwu gasịrị, ha nwere ike iwe iwe ogologo oge na ọbụlagodi mgbe ịgbaghara enyi ha, ha chọrọ oge dị ukwuu iji malite ịtụkwasị obi ọzọ .
Karịa nke a, ọ ga-ekwe omume ka ha mebie ndị ha hụrụ n'anya na iji ike na-achịkwa ya, n'agbanyeghị ma achọrọ nke a ma ọ bụ. Mgbe ha metere ndị enyi ọhụrụ, ọ na-adịkarị ha ka hà na-eme ihe ọchị, na-emekwa ihe ngosi.
O nwere ike ịbụ ihe kachasị njọ ikwe ka Ọrịa Cancer bụrụ ezigbo enyi gị n'ihi na ndị mmadụ nọ na ihe ịrịba ama a na-eguzosi ike n'ihe ma ha anaghị achọ igbu oge.
Agbanyeghị, ndị ha hụrụ n'anya ga-aghọta na oge ụfọdụ ha chọrọ ohere nke ha. Ozugbo ha na-enwe mmetụta na ha ga-emejupụta na mmekorita ha na mmadụ, ha anaghị eche maka imeghe na ịhụnaanya jiri obi ha niile.
Ihe ị ga-echeta banyere ọbụbụenyi Taurus & Cancer
N'ihe banyere mmewere nke ụwa, Taurus nwere ike ịdị iche na Cancer, nke dị na nke Mmiri. Otú ọ dị, ha na-ekwekọrịta dị ka ndị enyi n'ihi na ike ha na-emeso ụwa nkịtị na ebe a na-ahụ anya.
Amụrụ iji zụlite, Cancer nwere ike inyere Taurus aka inwe mmetụta uche, dịka mmiri ozuzo si enyere ụwa aka. Na nloghachi, Taurus nwere ike igosi Cancer ka ọ ghara inwe mmetụta dị nro n'ihi na a maara Bulls dị ka onye kwụsiri ike.
Abụọ ndị a kwesịrị ịkpachara anya na ịghara iji ihe ọma nke ọbụbụenyi ha na-eweta. A sị ka e kwuwe, Taurus nwere ike ịgwụ ike ịhụ Cancer ahụ nke ukwuu, ebe Cancer nwere ike iche na Taurus enweghị mmetụta ọ bụla.
Nkwekorita dị mkpa maka mmekọrịta ha na-arụ ọrụ, dị ka ihe ịrịba ama abụọ ọ bụla bụ ndị enyi. Ọ bụ ezie na Taurus dị, Cancer bụ kadinal, nke pụtara na nke mbụ anaghị agbanwe obi ya na nke ikpeazụ chọrọ onye siri ike ọ ga - atụkwasị obi mgbe ụwa nwere oke obi ọjọọ.
Ọrịa Cancer nwere ike iwepụta atụmatụ ọhụrụ maka ha abụọ iji sonye na egwuregwu. O kwere omume na ha ga-eme nke ọma ma ọ bụrụ na Ọrịa Cancer na-eweta echiche ọhụrụ na Taurus na-arụ ọrụ na ha.
Akụkụ kachasị mma nke ọbụbụenyi n'etiti Taurus na Cancer bụ eziokwu na mmekọrịta a siri ike ma nwee ike ịdịgide ndụ niile. Ihe ịrịba ama abụọ a bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi na nchebe, nke pụtara na ha nwere ike ịkwado n'ụzọ dị ukwuu.
Eziokwu ahụ bụ na ha abụọ hụrụ nchekwa n'anya ga-eme ka njikọ ha sie ike ma mee ka ọ dịkwuo nso n'ihe ọbụbụenyi dị mma pụtara.
Ndị obodo a na-eguzosi ike n’ihe ma nwee obiọma, na Ọrịa ahụ adịghị eche isi nri otu nri maka Taurus kwa izu, dị ka ndị nke ikpeazụ ahụ na-ahụ n’anya.
Na nloghachi, Taurus ga-eji ọilyụ gee ntị na nrọ niile Crab nwere, n'agbanyeghị ma nke ikpeazụ a ga-akpọ n'etiti abalị ma ọ bụ n'isi ụtụtụ iji kwuo banyere olileanya ya niile.
akara zodiac maka 8
E kwuwerị, ọbụbụenyi bụ ihe dị mkpa na-esote ibe gị n'oge niile. Ọzọkwa, ụmụ amaala abụọ a nwere mmasị na ibe ha maka àgwà ọma ha, nke pụtara na Taurus nwere mmasị na otu Cancer nwere ike isi duga n'ọnọdụ ọ bụla, ebe ụzọ ọzọ dị gburugburu, Cancer ahụ nwere ekele maka etu Taurus si enwe obi ụtọ n'ihe niile.
Ọ bụ eziokwu na nshịkọ na-ada ụda ma na-akpasu iwe, mana n'otu oge ahụ, Taurus dị isi ike. Otú ọ dị, ihe ndị a adịghị mkpa n’ikpeazụ, n’ihi na ha abụọ nwere ike ịnabata ibe ha.
Taurus Dị Ka Enyi: Ihe Mere You Ji Chọrọ Otu
Ọrịa Cancer Dị Ka Enyi: Ihe Mere You Ji Chọrọ Otu
Taurus Zodiac Sign: Ihe Need Kwesịrị Knowma
Akara Zodiac Cancer: Ihe Need Kwesịrị Knowmara
Nwoke Na-agba Nwoke Na-agba ịnyịnya Na-adịte Aka
Egwurugwu Nwoke na Nwanyi Scorpio Nwanyi Ogologo Ogologo
Mars na Capricorn Man: Mara Ya nke Ọma
Nwoke amuru na Mars na Capricorn adighi eleda iwu na iwu anya ma gha agbali igha ha oge obula o nwere ohere.
August 6 daysbọchị ọmụmụ
Nke a bụ profaịlụ zuru ezu banyere ụbọchị ọmụmụ nke August 6 na astrology ha na àgwà nke akara zodiac metụtara Leo nke Astroshopee.com
Pisces Sun Leo Moon: A Flamboyant mmadụ
N'ilekọta anya, ụdị Pisces Sun Leo Moon ga-eju onye ọ bụla anya na etu ha nwere ike isi jikọta mmadụ ozugbo ha meriri uche ha.
Ndabere Libra na Scorpio Enyi
Ọbụbụenyi dị n'etiti Libra na Scorpio nwere ike ịmeju afọ maka akụkụ abụọ a ka mmadụ abụọ a na-aghọta ibe ha ngwa ngwa.
Pisces Mmekọahụ: Ihe Ndị Dị Mkpa Na Pisces In Bed
Na akwa, Pisces ga-ege ntị na mmetụta ha mana ha ga-agbasokwa echiche na-enweghị isi na ịchụ nwoke na nwanyị agaghị ahapụ ihe ọ bụla ịchọrọ.
June 10 daysbọchị ọmụmụ
Nke a bụ nkọwa zuru ezu nke ụbọchị ncheta ụbọchị ọmụmụ nke June 10 na njirimara astrology ha na àgwà nke akara zodiac metụtara nke ahụ bụ Gemini site Astroshopee.com
Machị 2 Zodiac bụ Pisces - mmadụ Horoscope zuru ezu
N'ebe a, ị nwere ike ịgụ profaịlụ nke astrology zuru oke nke onye a mụrụ n'okpuru zodiac 2 nke ọnwa ya na nkọwa Pisces ya, nkọwa ndozi & àgwà mmadụ.
Urdị Ntugharị Taurus: Mmesapụ aka na Ihe ijuanya
Virgo Sun Scorpio Ọnwa: Intdị Nghọta
kedụ ka isi mara ma nwoke gemini ọ nwere mmasị
scorpio na pisces ndakọrịta enyi
gini na agbanye nwoke aquarius
ihe akara bụ october 24
ọrịa kansa horoscope october 2015
ihe zodiac bụ Eprel 21